अनुहारमा अनावश्यक रौँ छ ? सुन्तलाको बोक्राले हटाउनुस् ! – Khabar Silo
अनुहारमा अनावश्यक रौँ छ ? सुन्तलाको बोक्राले हटाउनुस् !
अनुहारमा आएका अनावश्यक रौँले कतिपयलाई हैरान बनाएको हुन्छ । यस्ता रौँले महिलालाई अझ बढी कुरुप देखाउने भएकाले पनि यो चिन्ताको विषय बनेको हुन्छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने सुन्तलाको बोक्रा र महको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।
सुन्तलाको बोक्रामा भिटामिन सी हुन्छ । जसले फ्री रेडिक्लससँग लड्ने काम गर्छ । परिणाम रौँ उम्रिने प्रक्रियामा ढिलाइ उत्पन्न हुन्छ ।
सुन्तलाको बोक्राले प्राकृतिक ब्लिचिङको समेत काम गर्छ । यसका एन्टीअक्सिडेसन हुन्छ । त्यसैले अनुहारको अनावश्यक रौँ हटाउनका लागि सुन्तलाको बोक्राको धुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यसपछि आफ्नो गाला र अन्य आवश्यक ठाउँमा पेस्टलाई राम्रोसँग लगाउनुहोस् ।पेस्ट लगाइसकेपछि केहीबेर सुक्खा हुन दिनुहोस् । तर, महले पूर्ण रुपमा सुक्खा हुन भने दिँदैन ।यसका लागि सानो कचौरामा सुन्तलाको धुलो र एक चम्चा मह लिनुहोस् । अनि यसको पेस्ट बनाउनुहोस् ।जब पेस्ट आंशिक रुपमा सुक्खा हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै मसाज गर्नुस् ।त्यसपछि आफ्नो अनुहारलाई पानीले सफा गर्नुस् । नियमित यस्तो गतिविधि एक महिनासम्म गरेमा राम्रो परिणाम दिन थाल्छ ।
काठमाडौं – शाकाहारी खाना खादा मष्तिष्कलाई ताजा राख्न मद्दत मिल्ने अनुसन्हधानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । मासुमा पाइने तत्व चाँडै पच्दैन । जबकि शाकाहारी खाना चाँडै पच्छ । शाकाहारी भोजनमा रोगसंग लड्ने क्षमता पनि बढी हुने गर्दछ । तरकारीमा भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एमिनो एसिडजस्ता अति आवश्यक तत्व पाइन्छन् । शाकाहारी भोजनमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटजस्ता तत्व पाइन्छन्, जो स्वास्थ्यका […]
कोराना अर्थात् कोभिड–१९ ले हामीलाई सचेत मात्र बनाएन स्वास्थ्यका विषयमा धेरै ज्ञान र केही दक्षता पनि दिएको छ । हात धुने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता सावधानीका उपायका बारेमा हामीले बुझेर अपनाउन पनि थालेका छौं । चीनको वुहानमा डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको ‘कोरोना भाइरस’ अर्थात् कोभिड १९ को संक्रमणले ६ महिनामा नै संसारको एक […]
गरिबी हटाउन चमत्कारी हुने गर्दछ यो विरुवा, यो दिशामा लगाउदाँ हुनेछ फलिफाप !
Posted on June 7, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । आजको समयमा मानिसलाई लगातार आवश्यकता बढ्नै जाने गरेका छन्। एक व्यक्तिको आवश्यकताको कुनै सिमा हुँदैन्। यो अवस्थामा सबैको चाहना अधिक धन कमाउनुको हुने गर्दछ। अहिलेको समयमा मानिस् आफ्ना असिमित चाहना हुरा गर्ने सपना बनाउने गर्दछन्। हर कोहीको चाहना हुन्छ, आफ्नै घर, बैँक ब्यालेन्स, गाडी तथा परिवारसँग सुखमय जीवन विताउने।आज हामी तपाईलाई यस्तो चमत्कारी […]